Goorma Ayey Dumi Doontaa Buundada Kaliya Ee Xidhiidhisa Real Madrid Iyo Cristiano Ronaldo? – Cadalool.com
December 16, 2018 Abdiwahab A. Abeye
Inkasta oo uu muddo sagaal sannadood ah joogay, haddana ma jirto waddo kale oo uu u maro kooxdiisii hore ee Real Madrid marka laga yimaado hal buundo oo halis ugu jirta inay dunto laba toddobaad kaddib.
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa xagaagii go’aansaday inuu ka tago Real Madrid, waxaanu ku biiray Juventus, laakiin kaliya shandaddiisa kama qaadanin Madrid, wuxuuse jaray dhamaan xidhiidhadii uu la lahaa sida baraha bulshada uu iska masaxay meel kasta oo farriin Real Madrid ah kasoo gelaysay amaba xasuusinaysa wararkeeda.
Ciyaartoyga uu kaga tegay garoonka Santiago Bernabeu, wax xidhiidh ah lama samaynin intii uu ka tegay, waxaana u dheer inuu ka xumaaday, si weyna uga gilgishay laba jeer oo Luka Modric uu ku garaacay abaal-marinta xiddiga sannadka ee The Best oo FIFA bixiso iyo Ballon d’Or oo labadoodaba uu hore isagu u haystay.
Si badheedh ayuu warbaahinta uga sheegay inuu isagu u qalmayey abaal-marinta la siiyey shaqsiga kale marka la eego tirooyinka uu garoomada kusoo bandhigay, waxaana ugu dambayn uu hambalyo aan niyadda ka imanin u diray Modric.
Intii uu Real Madrid joogay waxay isku xidhnaayeen Pepe, Fabio Coentra oo ay Portugal u wada dhasheen iyo James Rodriguez oo saddexduba ka tegay intii aanu isagu qaadanin go’aanka uu kaga baxayo Santiago Bernabeu, waxaana kaliya kaga hadhay magaalada Madrid saaxiibkii Marcelo oo ah buundada kaliya ee xidhiidhisa isaga iyo kooxdiisii hore.
Marcelo ayaa toddobaadkan sheegay in Real Madrid ay tebtay Ronaldo oo uu ku tilmaamay xiddiga ugu fiican dunida iyadoo uu ogyahay in xiddiga sannadka uu haysto Luka Modric oo Real Madrid ay wada joogaan, taasina waxay sare usii qaadday wararka suuqa ee sheegaya in marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga bisha January oo laba toddobaad ka dhiman yihiin in difaaca reer Brazil uu Juventus kula midoobi karo Cristiano Ronaldo.
Haddii uu Marcelo ka baxo Real Madrid, waxa gebi ahaanba go’aya xidhiidhkii kali ahaa ee Ronaldo la lahaa Real Madrid, sababtoo ah, iskuma wanaagsana xiddigaha kale ee Bernabeu jooga iyo xattaa maamulka oo uu hore ugu eedeeyey inay dhabarka u jeediyeen.